दाङका मतदाताले भने ‘मतदान गर्न... :: सुजिता कार्की :: Setopati
दाङका मतदाताले भने ‘मतदान गर्न व्यग्र प्रतीक्षामा छौं’(तस्बिरसहित)
नारायण खड्का दाङ, मंसिर २०
बुधबार बिहान सवा ८ बजेतिर तुलसीपुरको अरनीको मैदानस्थित मतदान बुथमा भेटिएकी ६१ वर्षीया विष्णु राना औधी खुसी देखिन्थिन्। उनी यसकारण खुसी देखिन्थिन् कि भोलि हुने निर्वाचनमा उनले मतदान गर्न पाउने निश्चित भयो।
झन्डै आधा घन्टा लाइनमा बसेर रानाले आफ्नो मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गरेकी थिइन्।
दाङ र सल्यान दुवै जिल्लामा उनको घर भएकोले दाङबाट मतदान गर्न पाउँछु कि पाउँदिन? भन्ने द्विविधा उनको मनमा रहेछ। बुधबार मतदाता परिचय पत्र पाएपछि भने अब मतदान गर्न पाइने भयो भनेर आफू ढुक्क भएको उनले बताइन् ।
[caption id="attachment_111493" align="alignnone" width="826"] मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गरेपछि खुसी मुद्रामा देखिएकी विष्णु राना[/caption]
यसअघि सल्यानबाट उनले मतदान गर्दै आएकी थिइन्।
दाङको सीमाना जोडिएको जिल्ला भएपनि सल्यान प्रदेश नं. ६ मा पर्छ। त्यसैले उनले यसपालि सल्यानबाट दाङमा मताधिकार गर्न पाउने गरि निवेदन दिएकी रहेछिन्। पहिलो पटक दाङबाटै मतदान गर्ने चाहना पूरा हुने भएपछि उनी औधी खुसी छिन् । ‘जीवनमा मतदान त धेरै गरे । तर, पहिलो पटक दाङबाट मतदान गर्ने चाहना अधुरै रहन्छ कि भन्ने आशंका मनमा थियो । तर, अब म ढुक्क भए । भोलि बिहानै भोट हाल्न आउँछु’६१ वर्षीया रानाले सेतोपाटीलाई भनिन्।
उनले राष्ट्रले सुम्पिएको अभिभारा पूरा गर्नु हरेक सचेत नागरिकको अहम कर्तव्य भएको तर्क गरिन्। ‘मतदान गर्नु जीवनको एउटा ठूलो पुन्य कर्म हो,’– रानाले थपिन् ‘ एक–एक भोटको महत्व हुन्छ। त्यसैले अमूल्य मतदान गर्न कोही चुक्नु हुन्न।’
[caption id="attachment_111494" align="alignnone" width="960"] परिचयपत्र लिनेको लाइन[/caption]
राष्ट्रलाई संकटबाट पार लगाउनका लागि मतदान सबैले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी उनले राष्ट्रले सुम्पिएको दायित्वबाट कोही पनि बञ्चित हुन नहुने बताइन्।
कस्तो उम्मेदवालाई भोट हाल्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा रानाले भनिन् ‘जसले दाङलाई राजधानी बनाउन सक्छ, जसले जनताको पीरमर्का बुझ्न सक्छ , जसले घरमा पानीको धारा ल्याउन सक्ने खालको छ त्यसैलाई मतदान गर्ने बताइन्।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का १८ वर्षीय सूर्य विश्वकर्मा पनि बुधबार बिहान आफ्नो मतदाता परिचय पत्र लिन आएको अवस्थामा भेटिए। उनले जीवनमा पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका रहेछन्। त्यसैले, विश्वकर्मालाई कतिबेला बिहीवार बिहान होला र मतदान गरुँला भन्ने हुटहुटी मनमा रहेछ। ‘पहिलो पटक मताधिकार पाएको छु । त्यसैले कतिबेला भोट हाल्ने समय आउला? भन्ने बेग्र प्रतिक्षा गरिरहेको छु’ विश्वकर्माले भने।
[caption id="attachment_111495" align="alignnone" width="826"] बुथ निर्माण गरिरहेका कर्मचारी[/caption]
प्लस टु पढ्दै गरेका विश्वकर्माले कस्तो व्यक्तिलाई विजयी गराउने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार मतदातामा हुने हुँदा आम जनता न्यायाधीशको भूमिकामा रहने यो विशिष्ट अवसर कसैले पनि गुमाउन नहुने धारणा राखे। ‘खराब उम्मेदवारलाई पाखा लगाउने र राम्रो व्यक्तिलाई विजयी बनाउने सम्पूर्ण अधिकार मतदातामा निहित छ’, – विश्वकर्माले थपे ‘ यस्तो विशिष्ट क्षण र दुर्लभ अवसरमा मतदान नगर्ने व्यक्ति घरमै सुत्ने हो भने देशले कहिलै पार पाउने छैन।’
उनले पनि दाङलाई राजधानी बनाउनका लागि लड्ने सक्ने, विकास प्रेमी, नैतिकवान, भिजनरी नेतालाई आफूले मतदान गर्ने बताए । ‘न्यायालयमा पनि भागबण्डा, विश्व विद्यालयमा पनि भागवण्डा, प्रहरी प्रशासनमा पनि भागवण्डा, डाक्टरीमा पनि भागडण्डा र कर्मचारी सिलेक्टगर्दापनि भागवण्डा गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुन आवश्यक छ’ विश्वकर्माले भने।
त्यस्तै, अरनीको मैदानस्थित बुथमा बुधबार बिहान भेटिएका दाङका टेबुल टेनिस प्रशिक्षक केशव श्रेष्ठले पार्टी भन्दापनि स्वच्छ छवि भएका र इमान्दार उम्मेदवारलाई आफूले मतदान गर्ने बताए। छोरीको मतदाता परिचय पत्र लिनका लागि आएको बताउने ४८ वर्षीय उनले छोरीलाई पनि यो उम्मेदवार र यो पार्टीलाई मतदान गर भनेर प्रेसर नदिएको बताए।
[caption id="attachment_111497" align="alignnone" width="960"] छोरीको मतदाता परिचयपत्र लिन आएका टेबुल टेनिस खेलाडी केशव श्रेष्ठ[/caption]
‘मेरो छोरी पढे लेखेको छ र कस्तो उम्मेदवारलाई जिताउँदा समग्र दाङ र दाङवासीको हित हुन्छ भन्ने म भन्दा राम्रो ज्ञान सायद उनलाई नै छ’श्रेष्ठले भने ।
तर, उनले पनि दाङलाई राजधानी बनाउन सक्ने व्यक्तिलाई नै आफूले मतदान गर्ने बताए । श्रेष्ठले भोलि एकदिनका लागि राज्यको लागि योगदान गर्ने दिन भएको हुँदा सबैले प्राप्त मताधिकारलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४, ०२:२९:५४